Wallaga Bahaa: ''Lakkoofsi namoota ajjeefamanii 23 yoo gahu, 72,000 qe'eerraa buqqa'aniiru'' - BBC News Afaan Oromoo
Walitti bu'insa naannoo daangaa Benishaangul Gumuz godina Kamaashii fi Oromiyaa aanaalee wallagga Bahaa ollaatti uumameen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 23 gahuufi kuma 72 kan tahan ammo qe'eefi qabeenyaa isaaniirraa buqqa'u qondaaltoonni BBC'tti himan.
Tibbana rakkoo nageenyaa naannichatti uumameen dhalatootni Oromoo fi Amaaraa hedduun qe'eerra buqqa'uun kaanis ajjeefamaa akka jiran Obbo Taakkalaa Tolasaa itti gaafatamaan Waajjira Bulchiinsaa fi Nageenyaa godina Wallagga Bahaa himaniiru.
Hanga har'aatti daangaa Oromiyaa keessatti qofa namootni 23 ajjeefamuun namootni kuma 72 gahan qe'eerraa buqqa'aniiru jedhan.
''Baruma baraan, eegeree Oromiyaatti irreeffanna jennee dhaadanna ture''
Namootni qe'ee irraa buqqa'an kunneen baay'inaan aanaalee godina Kamaashii kan akka Yaasoo fi Balo Jigaanfoy irraa yoo tahu, dabalataan aanaalee Wallagga Bahaa kan akka Saassigaa fi Haroo Limmuu irraas bal'inaan keessatti argamu jedhan. Lakkofsi namoota ajjeefamanii garuu kan Beenishaangul keessaa akka hin daballanne himaniiru.
Sadarkaa odeeffaannoottis qabeenyi namoota qe'ee irraa buqqa'anii saamamaa akka jiruu dhageenyeerra jedhan. Kanumaan wal qabatee godina Wallagga Bahaa aanaa Saassigaa keessaas horiin 70 ol tahan oofamanii akka fudhataman himaniru.
Itti gaafatamaa Waajjira komunikeshiinii Aanaa Haroo Limmu Obbo Dhugaasaa Jaalataa akka jedhanitti, aanaa isaanii keessatti qofa namootni shan ajjeefamuun namootni torba tahan madaa'aniiru.
Haa tahu malee daangaa Oromiyaa cabsuun waan seenanii jiraniif reeffa namoota du'anii illee kaasuun akka hin danda'amne himaniiru.
Hawaasni akka himuttis qaamni haala gaariin hidhatee fi hidhannoo ammayyaa'aa qabu duduuba akkajiru dhageenya jedhan Obbo Dhugaasaan.
Namootni kuma 25 tahanis qe'ee irraa buqqa'uun aanaa isaanii keessa buufatanii akka jiran himaniiru.
Raayyaan iittisa biyyaas haalicha gama lamaanuun osoo lubbuun namoota baay'ee hin darbiin tasgabbeessuf yaadeeti malee humna dhukaasa bane kana haleeluu hin dadhabne jedhan Obbo Tolasaan.
Gama Benishaanguliin qaamni hidhannoo guutuu fi ammayyaa'aa qabu akka jiru hubanneerra jedhan.
Kanaan duras qonnaan bultootni keenyaa fi Beenishaangul naannoo daangaatti walitti bu'aa araaramaas turaniiru.
Bara kamiyyuu hidhanno qindaa'aa akkasiin waraanni gaggeefamee hin beeku. Amma garuu qaamni leenjii waraanaa gahaa qabu akka keessa jiru hubanneeraa,'' jedhu Obbo Taakkalaan.
Mootummaan Naannoo Oromiyaa haalichi kana caalaa akka hin babal'anneef hojjechaa jira kan jedhan Obbo Taakkalaan namootni faayidaa siyaasaa addaaf uummata walitti buusan jiraataniyyuu Naannoon Beenishaangul garuu kana taasisa jennee hin yaadnu jedhan.
Dabalataan akka qorannoodhaan bira geenyetti namootni maallaqa ramaduun jijjirama akka biyyaatti dhufaa jiru gufachiisuuf uumata waliiti buusan jiru jedhan Obbo Taakkalaan. Namoota qe'eerra buqqa'an kanneeniif bulchiinsi godina Wallaga Bahaa, abbootiin qabeenyaa magaalaan Naqamtee fi aanaaleen deegarsa gochaa akka jiran himaniiru.
Mootummaan federaalaas deegarsa midhaan nyaataa konkolaataa 10 tahu fe'uun geejibsiisaa akka jiru himuun walumaagalaan konkolataa 30 kan tahu yeroo gabaabaatti akka qaqqabu himaniiru.
Haaluma walfakkaatunis pirezidaantii ittaanaan naannoo Beenshangul Gumuz Obbo Abaraa Baayataa BBC'tti akka himaniitti, keessattuu aanaa Baloo Jigaanfooy ganda Daalachaatti walitti bu'iinsi kan ture yoo ta'u, manneen 75 gubachuusaaniifi gandoota biroottis walitti bu'iinsi walfakkaataan umamuu himaniiru.
Keessattuu magaalaa Sobey kan aanaa Baloo Jigaanfootii namoonni hedduun buqqa'aniiru kan jedhan pirezidaantii ittaanaan kun, gandoota naanawa Soggeetti argaman Libiigaa, Saay Daalaachaafi Taankaaraadhaa namoonni hedduun buqqa'usaanii himaniiru.
''Taankaaraatti manneen jireenyaa 105 gubatanii namoonni sadii ajjeefamaniiru,'' kan jedhani Obbo Abaraan, bakka Bacibac jedhamutti namni biraa tokko du'ee kanneen lama ta'an ammoo ganda Angarbaajaatti miidhamusaanii himaniiru.
Akka Obbo Abaraatti namoonni buqqa'uun gara naannoo Oromiyaa deeman jiraachusaaniifi sababii sodaatiin gara bosoonaatti galan kan jiran yoo ta'u lakkoosfi isaanii meeqa akka ta'e garuu walitti qabatanii akka hinjirre dubataniiru.
Namoonni buqa'an kunneenis naannoo Benshaangul Gumuz qofaa osoo hintaane gandoota Oromiyaa naannicha daangeessan hunda irraa ta'u kan himan Obbo Abarraan, Aanaa Saasiggaa, f gandawwan kaampii, Baloo Bareedaa, Simintanyaa jedhaman irraa sodaadhaan buqqa'uun gara Naqqamteefi jiddugalawwab Baloo bareedaatti akka argaman dubbataniiru.
Rakkoo Kamashiifi aanaalee Oromiyaa ollaatti uumameen lubbuun dare 12 kan ga'e yoo ta'u, lakkoofsi namoota buqqa'aniif yaachiisaa ta'un barame.
Lolli Tigraay Itoophiyaa keessaa maali? Oduu gabaabaafi dheeraa